Faritra ao Sri Lanka. Avy aiza? ~ Journey-Assist - Avy aiza isika?
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Faritra ao Sri Lanka. Avy aiza?
21 Desambra, 2019
Avy aiza any Sri Lanka?
Raha te hisidina mankany Sri Lanka ianao, dia tokony hoheverinao fa manan-danja io nosy io ary tsy mitovy ny faritra misy azy avy eo amin'ny natiora, ny endrika, ny haavon'ny fotodrafitrasa, ny lafiny kolontsaina ary izay azonao atao any. Noho izany, manoro hevitra izahay mba hahazoana hevitra ankapobeny hoe inona no ampahany amin'i Sri Lanka ho mahaliana anao, vakio ity lahatsoratra.
Kandy sy iva
Sri Lanka Avaratra
Ny faritra avo any Sri Lanka dia angamba ny faritra mahafinaritra indrindra eto amin'ity firenena ity. Tamin'ny taonjato faha-19 dia nantsoin'ny mpanjanantany anglisy ity toerana ity hoe Hill Country ("firenena be tendrombohitra"). Noho izany anarana izany dia malaza eo an-toerana izy mandraka androany.
Ny fitaovam-pitaterana mety indrindra amin'ny dia an-tongotra ao amin'ity faritra ity dia fiaran-dalamby miadana, lalana izay mivezivezy amin'ny sisin-dàlana tsara tarehy indrindra akaikin'ny fambolena dite tsy misy farany avy any Kandy ka mankany Badullah. Ireo toerana lehibe rehetra ao amin'ny faritra alpine izay mahaliana ny mpizaha tany dia eo amin'io lalana io. Mba hizaha azy ireo dia azonao zarazarao mandritra ny andro maromaro ny dia, mijanona eny an-dalana.
Ny afovoan'ity faritra ity no tanàna kely Kandy. Ho an'ny 40 km miala an'io tanàna io, amin'ny làlana mankany Colombo, no misy ny Pinawella Elephant Nursery. Toerana mahaliana maro hafa no hita any atsimon'i Kandy, manaraka ny fizarana fiaran-dalamby manomboka any Kandy ka Bad Badullah.
Ny fitsangatsanganana any Kandy sy mankany amin'ny faritra avo dia mety indrindra ho an'ireo izay maniry hifankahalala amin'ny kolontsaina eo an-toerana sy ny rivotra iainan'ny faritany Sri Lankan.
Any amin'ny faritra afovoan'i Sri Lanka no faritra avo indrindra amin'ity firenena ity - Pidurutalagala. Ao afovoany dia ny tanànan'ny Gampola, Matale, Nuwara Eliya ary Hatton, izay ahitanao ny tsangambato ara-kolontsaina marobe. Ankoatr'izany dia any amin'ny afovoan-tanàna izy no mifantoka amin'ny fambolena dobo malaza eran-tany. Ny faritany afovoany dia mamokatra betsaka kokoa amin'ity vokatra ity noho ny faritra hafa rehetra ao Sri Lanka.
Nuwara Eliya dia toeram-pivoahana alpine (haavony - 1 884 m). Noho ny toetrandro malefaka sy ny hatsarana mahafinaritra dia malaza io mpizaha tany io. Ny fividianana tsara indrindra azonao alaina eto dia avo lenta ambony any an-toerana. Ny fitsidihana ny fambolena dite sy ny fampiasana ity zava-pisotro ity dia singa takiana amin'ny fandaharan'asa fizahan-tany rehetra ao Nuwara Eliya.
Na dia ao afovoan-tanànan'i Sri Lanka aza dia misy ny manintona voajanahary malaza toy ny Pintan'i Adam. Ny solontenan'ny fivavahana 4 dia mihevitra azy io ho masina.
Mba hahafantaranao tsara ny kolontsaina Sri Lankan dia nasaina hitsidika ny Triangle volamena. Ity faritra ity dia ao avaratr'i Kandy ary ahitana toerana manan-tantara 3 lehibe. Ity no manda vatolambelin'i Sigiriya, sisan'ny tanàna tranainy Anuradhapura, ary koa tanàna hafa fahiny - Polonnaruwa, izay renivohitr'i Sri Lanka taloha.
Izy io dia Anuradhapura, Polonaruwa ary Sigiriya izay ireo tampon'ilay Triangle volamena Sri Lankan. Ireo toerana malaza toa ny Mount Mihintale sy ny Tempolin'i Dambulla dia hita ao amin'ity faritra manan-tantara ity koa.
Ny fitsangatsanganana any amin'ity faritr'i Sri Lanka ity dia mety ho an'ireo izay te hifankahalala amin'ny tantaran'ny Sri Lanka mahatalanjona.
Ny faritany amin'ity faritra ity dia manomboka eo Negombo ka hatrany Halle. Izy no morontsiraka andrefana izay ampahany lehibe indrindra an'ny firenena. Ao amin'ity faritra ity dia Colombo - renivohitra sy ny vavahadin'ny rivotra ao Sri Lanka. Marina fa misy fitsangatsanganana rehetra manodidina ny firenena manomboka eto.
Eo avaratry Colombo no tanànan'ny Negombo lehibe. Mpizahatany marobe no misafidy azy io ho toerana nanombohany fitsangatsanganana manerana an'i Sri Lanka. Ao ambadiky ny Negombo, any amin'ny morontsiraka avaratra, misy ny Saikinosy Kalpitiya, manasaraka ny iray amin'ireo valan-javaboarim-pirenena - Vipattu.
Any atsimon'ny renivohitra Sri Lankan dia manitatra ny torapasika malaza any Sri Lanka - Bentota, Kalutara ary Beluvara. Izy ireo dia natao voalohany indrindra ho an'ny fitsangatsanganana fonosana, ary koa amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina lava. Anisan'ireo mpizahatany mahaleo tena i Hikkaduwa no malaza kokoa. Na izany aza, ao Bentota dia misy hotely sy trano fandraisam-bahiny izay ahafahanao miohatra tsara amin'ny morontsiraka avaratr'i Sri Lanka.
Colombo sy Negombo dia akaiky ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Sri Lanka. Noho izany, ny fanontaniana voalohany tsy maintsy anjaranao ny mpizahatany rehetra maniry ny handinika ny zava-drehetra any Sri Lanka (na ampahany lehibe aminy) no hanapa-kevitra hoe iza amin'ireto tanàna ireto mila misafidy ny hanombohana ny fitsidihanao.
Hikkaduwa no tena malaza amoron-dranomasina. Io no toerana fisakafoanana tsara indrindra any Sri Lanka.
Ny tena mahasarika an'io faritra io dia ny Coral Reserve, izay misy zato metatra miala ny ranomasina. Eto dia afaka mahita karazany 70 haran-dranomasina ianao.
Ny Mount Lavinia dia toeram-pivarotana iray hafa hita any akaikin'i Colombo, ary tora-pasika be dia be.
Ny morontsiraka andrefana dia mety ho an'ireo izay mitady fampiononana farany, izay mety manome ireo hotely avo lenta hita eto.
Azo inoana fa io ampahany amin'ny morontsirak'i Sri Lanka io dia azo antsoina hoe ny kolontsaina mahaliana indrindra. Na izany aza, ny fotodrafitrasa momba ny fizahan-tany dia tsy dia fivoarana eto raha oharina amin'ny morontsiraka andrefana. Any amin'ny morontsiraka atsimon'i Sri Lanka, mpizahatany maro no mahasarika amoron-dranomasina tsara tarehy, trano fanjanahan-tany amin'ny fanjanahana any Galle, vohitra kely miloko kely, kianjan'ny voaniho, fambolena voanio, tempoly taloha, ary koa zaridainam-pirenena izay mitondra safarisoa.
Ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny morontsiraka atsimo dia Galle, ary ny faharoa taorian'ny Matara.
Rehefa mifidy tora-pasika sy hotely amin'ny morontsirak'i Sri Lanka atsimo, tokony hoheverina ho manam-pahaizana manokana eo an-toerana. Ny torapasika tsara indrindra eto amin'ity faritra ity dia i Mirissa, Tangalla ary Unawatuna. Ireo dia tora-pasika lehibe, izay misy safidy fonenana maro. Amin'ny ankapobeny, ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina eto dia tena mivoatra. Eo anelanelan'ireo tora-pasika lehibe ireto amoron-tsiraka dia misy moron-dranomasina kely, hotely lehibe ary tanàna kely, izay trano hivelomana maro.
Ny morontsiraka atsimo dia mety ho an'ireo izay liana amin'ny fialan-tsasatra amin'ny demokratika amoron-dranomasina.
Amin'ny lafiny iray, ity ampahany amin'ny firenena ity dia azo antsoina hoe ny mifanohitra amin'ny be olona iray marobe sy ara-toekarena mandroso. Mijanona ho saika tsy manam-paharoa ireo torapasika eto, tsy dia tsara loatra ny foto-drafitrasa ary vitsy mpizahantany.
Ny mponina any atsinanan'i Sri Lanka dia ahitana ny Tamil sy ny Silamo ao an-toerana (ny farany dia teratany Malay ary Moors). Manomboka amin'ny faritra avaratra amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny faritra atsimo, ny tanànan'ny mpanjono indrindra. Ny fitsangatsanganana manaraka ny morontsirak'i Sri Lankan dia tsy mendrika ho an'ny rehetra, satria, araka ny efa voalaza, dia fivoarana ny fotodrafitrasa eto. Na izany aza, ny tombony amin'ity faritra ity dia misy tora-pasika tsara, safidy malalaka amin'ny fisarahana sy ny maroloko miloko, izay potiky ny haben'ny miaramila ihany, satria tsy ela akory izay dia nisy ady an-trano.
Ny tanànan'ny Trincomalee, Arugam Bay ary ny torolàlana ao an-toerana no tena todinana amin'ny dia mankany amin'ny morontsiraka atsinanana.
Ny faritra avaratr'i Sri Lanka dia ahitana distrika 5 - ireo no Jaffna, Mannar, Mullaitiva, Vavuniya ary Kilinochi. Ny tanàna lehibe amin'ity ampahany ity amin'ny firenena dia i Jaffna, izay eo amin'ny saikinosy mitovy. Any amin'ny faritra avaratr'i Sri Lanka, dia nisy ady tsy tapaka nandritra ny 300 taona teo, izay misy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny mponina ao an-toerana. Na izany aza, misy maro ny zavatra voajanahary sy ara-tantara, ary koa ny zavatra marisika mahafinaritra. Indrindra indrindra, amin'ny faritra avaratry ny firenena dia misy tempoly hindoa maro.
Talohan'ny ady an-trano, izay naharitra hatramin'ny 1983-2009, dia be mpitia i Jaffna teo amin'ireo mpizahatany ary manana fampandrosoana tsara (faharoa taorian'ny renivohitra). Na izany aza dia nandroaka azy ny ady. I Jaffna no fiarovana mafy indrindra amin'ny fisaraham-bazana Tamil. Taona vitsy lasa izay, misy vahiny iray afaka mahazo alalana manokana fotsiny. Saingy izao dia nisokatra ny faritra ho an'ny mpizahatany. Tsy misy fizahana, manjaka eto ny fitoniana. Mbola maro ny toby miaramila, na izany aza, ny mpizahatany dia zara raha misy ny fahatongavan'izy ireo.
Azo antoka fa tsy misy tora-pasika eto. Amin'ny ankapobeny, ny fotodrafitrasa ho an'ny mpizahatany any avaratra dia mbola tsy fivoarana ihany, noho izany dia tsy maintsy mieritreritra ny alehanao ianao rehefa mivahiny amin'ity faritra ity.
Ny Avaratra dia fantatra ho an'ny kolontsain'izy ireo, izay tsy mitovy amin'ny manjaka any amin'ny faritra hafa any Sri Lanka. Ny lafiny avaratra amin'ity firenena ity dia ny Tamils ​​no be mpitia indrindra, ary ny ankamaroany dia Hindu. Eto dia tsapa na aiza na aiza ny fitaomana Indiana, anisan'izany ny «culinary».